Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny ambaratonga "Avoid Travel" ao Etazonia dia nesorina ho an'i Jamaika izao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, androany dia nandray ny vaovao fa ny Foibe Fanaraha-maso sy Fisorohana ny Aretina (CDC) ao Etazonia dia nanaisotra an'i Jamaika tamin'ny fanombanana ny risika "Avoid Travel to this Destination".
Ny Minisitry ny Fizahantany dia nidera ny manampahefana ara-pahasalamana sy ny mponina ao Jamaika noho ny asa fampidinana ny tahan'ny otrikaretina COVID-19 sy ny hopitaly.
Laharana amin'ny Ambaratonga faha-3 izao i Jamaika, izay mandrisika ireo mpandeha any Etazonia mba hanao vaksiny tanteraka alohan'ny handehanana.
Ny Amerikanina amin'ny ankapobeny dia manohy mandeha any amin'ny toerana tiany hotsidihina.
“Fivoarana tena tsara izany. Te-hidera ny manampahefana ara-pahasalamanay sy ny vahoakan'i Jamaika noho ny asa fampidinana ny tahan'ny otrikaretina COVID-19 sy ny hopitaly, izay tsara ho an'ny filaharana fanombanana ny risika. Ankoatra izany, ny Corridor Resilient dia mijanona ho toerana azo antoka ho an'ny mpitsidika sy ny mpiasa miaraka amin'ny tahan'ny vaksiny avo lenta sy ny tahan'ny otrikaretina ambany.
Laharana amin'ny Ambaratonga faha-3 izao i Jamaika, izay manentana Mpizaha tany Etazonia ho vita vaksiny tanteraka alohan'ny handehanana. Na eo aza ny fanombanana ny loza ateraky ny CDC, ny Amerikanina amin'ny ankapobeny dia manohy mandeha any amin'ny toerana tiany hotsidihina.
Nanamarika i Delano Seiveright, mpanolotsaina zokiolona sy stratejika ao amin'ny ministeran'ny fizahantany, fa “vaovao tsara tokoa izany. Ny laharana Level 4 teo aloha dia niteraka fikorontanana tamin'ny faribolana sasany ary azo antoka fa tsy optika tsara. Na izany aza, miaraka amin'ity filaharana nohatsaraina ity dia hanampy indrindra amin'ny ezaka ataontsika amin'izao fotoana izao sy tena mahery vaika mba hampiroboroboana ny fahatongavan'ireo mpizahatany avy amin'ny tsenantsika rehetra. "
Ny Minisitra Bartlett dia any Royaume-Uni (UK) amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ekipa avo lenta avy amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Jamaika Tourist Board (JTB) mandray anjara amin'ny World Travel Market, iray amin'ireo seho ara-barotra iraisam-pirenena lehibe indrindra manerantany. Miaraka aminy ny Filoha JTB, John Lynch; Talen'ny fizahantany, Donovan White; Mpanolotsaina ambony sy stratejika, Minisiteran'ny Fizahantany, Delano Seiveright; ary Talen'ny Faritra JTB ho an'ny UK sy Eoropa Avaratra, Elizabeth Fox.
Ny fifampiraharahana any Angletera dia namarana ny tsenan'ny tsena manerantany notarihin'ny Minisitra Bartlett sy ireo tompon'andraikitra ambony izay nahitana ny tsena roa lehibe indrindra any Jamaika, Etazonia sy Kanada, ary nijinja fahombiazana goavana tamin'ny fampiroboroboana ny fiaramanidina ho any amin'ny nosy ary nanome toky ireo mpandray anjara amin'ny COVID- fiarovana mifandraika amin'ny toerana haleha. Ny minisitry ny fizahantany ihany koa dia nitarika ny fiaraha-miasa tany Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, ary Riyadh, Arabia Saodita, izay amin'ny ampahany dia hiteraka fisokafan'ny fizahan-tany sy ny fampiasam-bola ho an'i Jamaika.